Gabadha Madaxweyne Obama oo makhaayad ka shaqaynaysa - BBC News Somali
Image caption Sasha marka ay shaqada dhamayso waxaa qaada ilaaladeeda
Sasha Obama, gabadha uu dhalay madaxweynaha Maraykanka Barack Obama, ayaa istareexii ay ku haysatay aqalka cad waxay ku beddelatay inay ka shaqayso makhaayad lagu iibiyo cunnada badda, sida ay warinayso warbaahinta Maraykanka.
Gabadha oo 15 jir ah ayaa shaqo xilliga xagaaga ah ka billowday inay raashinka ka iibiso makhaayadda Martha's Vineyard ee Massachusetts.
Sasha oo isticmaalaysa magaceeda buuxa ee Natasha, ayaa waxaa makhaayadda u raacay koox ka kooban lix qof oo ka tirsan ilaalada aqalka cad ee loo yaqaanno 'Secret Service' sida uu qoray wargayska the Boston Herald.
Magaalada ayaa ah goob ay tagaan reer Obama xilliga fasaxa xagaaga.
Sawirro ayaa muujinayey gabadha ugu yar carruurta madaxweynaha oo ku labbisan funaanadda buluugga ah ee makhaayadda looga adeego iyo koofi, kana shaqaynaysa makhalka.
Aqalka cad ayaan wax hadal ah ka soo saarin akhbaartaas, laakin marwada 1aad Michelle Obama ayaa ka hadashay inay isku dayayso in labadeeda gabdhood ay nolol caadi ah ku noolaadaan intii macquul ah.
Kooxda amaankeeda ilaalinaysa ayaa lagu arkay iyagoo ku dhex sugaya gaari meel u dhow makhaayadda yaalla, ama fadhiya kuraasta, inta ay gabadha 1aad cunnada ka iibinayso dadka dalxiisayaasha ah.